ACCUGENCE စီးရီးထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ် ACCUGENCE စီးရီးပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ
ACCUGENCE ®Multi-Monitoring System (Model No. PM 900) သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သောမျိုးဆက်သစ်၊ အဆင့်မြင့် multi-monitoring system တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ Multi-Monitoring System သည်အဆင့်မြင့် biosensor နည်းပညာတွင်အလုပ်လုပ်ပြီး Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid နှင့် Blood ketone အပါအ ၀ င် multi-parametes များကိုစစ်ဆေးသည်။
ACCUGENCE ® LITE Multi-Monitoring System (Model No. PM 910) သည် PM900 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအခြေခံ multi-monitoring monitoring system မှသင်မျှော်လင့်ထားသောအဓိကအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ACCUGENCE ® Blood Glucose Test Strip (GOD) သည်ဂလူးကို့စ် oxidase အင်ဇိုင်း (GOx သို့မဟုတ် GOD) ကိုအခြေပြုစမ်းသပ်ထားသော strips များဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်ရော၊ ကျွမ်းကျင်သုံးအတွက်ပါသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။
ACCUGENCE ® Blood ketone Test Strip ကို ACCUGENCE series Multi-monitoring System နှင့် တွဲ၍ သွေးတစ်ခုလုံး၌ Blood ketone အဆင့်ပမာဏကိုတိုင်းတာရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ACCUGENCE ® Uric Acid Test Strip ကို ACCUGENCE series Multi-monitoring System နှင့် တွဲ၍ သွေးတစ်ခုလုံး၌ယူရစ်အက်စစ်ပမာဏကိုတိုင်းတာရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ACCUGENCE ® Hemoglobin Test Strip (HB) ကို ACCUGENCE series Multi-monitoring System နှင့် တွဲ၍ ဟေမိုဂလိုဘင်ပမာဏအားတိုင်းတာရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
သကြားစစ်ဆေးစက်သည်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်, အစာရှောင်ခြင်းသွေးသကြား ၁၀၀, အခမဲ့သွေးချိုစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာ, Pneumotachograph Spirometer, သွေးချိုစမ်းသပ်စက်, ၅.၂ သွေးသကြား,